Caalbaasii Bittaa Meeshaalee | | Awash Tenders
Moyale Woreda F/E/D/Bureau
Kallacha Oromiyaa Sep3,2020
Walta’insa Dinagdee Aanaa Moyaalee bara baajeta 2013tti taajaajila Waajjiraalee Mootummaatiif kan oolu Meeshaalee Barruu, Elektirooniksii, Farnicherii adda addaa fi Uffata Seeraa hojjettootaa caalbaasii ifaatiin Wal-dorgomsiisee bituu barbaada
Ulaagaalee dorgomtoonni guuttachuu qaban
1. Dorgomtoonni caalbaasii eeyyama seeraa kan qaban Lakk. TIN, VAT fi waraqaa ragaa dhiyeessummaa kan qabanii fi eeyyamni isaanii bara 2013 kan haaromfatan.
2. Dorgomaa dhuunfaa yoo ta’e kappitaala 100,000 kan qabuu fi Galmaa’aa VAT kan ta’e garuu IMX yoo ta’e kappitaalli hin ilaalamu. dorgomtoonni kiraa sassaabdummaa fi malaammaltummaa irraa bilisa ta’ uu qabu.
3. Caalbaasii kana keessatti waan caalbaasii kana gufachiisu qaamni tolchee argame caalbaasii ala ta’uu gara fuulduraatti bittaa mootummaa akka hin dorgomne taasisuu fi ammas maallaqni caalbaasii kabachiisuuf qabame galii mootummaaf ta’a.
4. Dorgomtoonni caalbaasii sanada meeshaa bitanii dhiyeessuu qabu.dorgomtoonni erga caalbaasiin banamee booda yaada haaraa dhiyeessuus ta’ee fudhachuun hin danda’amu.
5. Dorgomtoonno ‘waliigaltee kabachiisaa qarshii 2% bifa CPO /garshiin poostaa orijinaala keessa ka’aanii cufuu qabu.
6. Caalbaasiin kan cufamu gaafa 11/01/2013 waaree booda sa’aatii 11:30 yoo ta’u kan banamu 12/01/2013 waaree dura sa aatii 3:00 irratti ta’a.
7. Sanada caalbaasii guyyaa hojii 15 keessatti Waajira Mallaqaa fi Walta’insa Dinagdee Aanaa Moyaalee kutaa Adeemsa Bittaa fi Bulchiinsa Qabeenyaatti kan dhiyaatu ta’a.
8. Moa’ataan caalbaasicha mo’ate darbe gosoota meeshaa mo’ate yeroo kennameef keessatti gatii geejjibaa fe’insa ofii isaatiin danda’ee Kutaa bulchiinsa qabeenyaa waajjirichaatti galchuu qaba.
9. Dorgomtoonni sanada caalbaasii bitatan irratti maqaa fi teessoo isaanii barreessuu qabu.
10. Sanada caalbaasii koppii fi orijinaalaan poostaan gara garaa lamaam seemiin cufamee galuu qaba.
11. Sanada caalbaasii erga guutamee galeen booda wantoonni irra deebi amee sirreeffamu yoo jiraate guyyaa caalbaasiin banamu guyyaa 5 dura dorgomaan dhiyeessuu danda’a.
12. Manni hojichaa mo’ataa mo’ataa caalbaasichaa walun waliigaltee osoo hin raawwatin dura gatii ittiin mo’ate osoo hin jujurin baayyina dhiyeessii ajaja itti kennu irraa 20% hiriisuu ykn dabaluuf mirga qaba
13. Manni hojichaa filannoo biroo yoo argate caalbaasii kana walakkaanis ta’ee guutummaan guutuutti haquudhaaf mirga guutuu qaba.
14. Mo’ataan caalbaasii meeshaalee qulqullina qaban dhiyeessuu qaba
15. Mo ataan caalbaasii gati mo ateen bittaa bara 2013 hunda akkka dhiyeessu waliigaltee ni raawwata.
16. Mo’ataan caalbaasil meeshaan dhiyaatee hang xumuramutti gatii mo ateen kan walii gala irraa 10% CPO mana hojichaaf qabsisuu qaba.
17. Eeyyama dhiyeessaa ta’ee ittiin galmaa’e kan qabu ta’uu qaba.
18. Qarshii hin deebine 100 kaffaluun sanada bitachu qaba
19. Bakka bu’aan tokko nama tokko qofaaf ta’a. Waraqaa eenyummaa isaa ibsu qabatee dhiyaachuu qaba
Hubachiisa – Yeroo sanada bitachuu dhuftan qarshii100 account 1000026238769 irratti galii gochu silippii baankii qabattanii dhuftu dorgomtootaa hundi gatii meeshaa dhiyeessan irratti gatii VAT dabalamee ta’uu qaba. Odeeffannoo dabalataaf Lakk.bilbilla 0464440207 fi 9984679359. Waajjira Mallaqaa fi Walta ‘insa Dinagdee Aanaa Moyaalee